Chelsea oo war RASMI ah kasoo saartay in taageerayaasheedu ay fal cunsurinnimo kula kaceen Saalax – Gool FM
(England) 12 Abriil 2019. Chelsea ayaa waxay war rasmi ah kasoo saartay arinta ku aadan aflagaado iyo cunsuriyada ka dhanka ah xidiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax.
Baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay Fiidiyoow muujinaya in qaar ka mid ah taageerayaasha Blues ee kasoo muuqday mid ka mid ah Maqaayadaha lagu caweeyo ee dalka Czech ay isku dayeen inay sameeyaan falal isugu jira aflagaado iyo cunsuriyad ka dhan ah Maxamed Saalax, kahor kulankii xalay ku dhex maray kooxaha Chelsea iyo Slavia Prague tartanka Europa League.
Hadaba kooxda Chelsea ayaa qoraal ay kasoo saartay arintan ku saabsan cunsuriyada, waxay ku sheegtay, inay dhan walba kaga soo hor jeedo midabtakoorka ama habdhaqan noocan oo kale ah.
“Chelsea waxay diidan tahay qaababka kala duwan ee midabtakoorka, hadii ay jirto cadeyn cad ee muuqata, inay jiraan xubno ku lug leh habdhaqankan, waxaan qaadi doonaa talaabada ugu xoogan ee ka dhanka ah shaqsiyaadka noocaas oo kale ah”.
“Shaqsiyadkan waxay waji gabax ku yihiin taageerayaalka wanaagsan ee kooxda Chelsea. mana cafin doonaan”.
Dhacdadan ayaa imaaneysa kahor kulanka ay Axada ku wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Chelsea horyaalka Premier League, kaasoo ka dhici doono garoonka Anfield.
Neymar aabihiis oo go’aamiyay wararka xanta ah ee ku aadan in wiilkiisa uu ku biirayo Real Madrid